AC Milan oo samaysay arrin marka ay dhacdo ay Horyaalka qaadi jirtey (Akhri 4tan rikoodh) | Hadalsame Media
DEG DEG: ”MW ma faragelin karo howlaha RW” – War Saxafadeed…
Madaxwaynuhu awood sharci ah ma u leeyahay inuu laalo ama dhimo…
”Dhabarka ayaad naga toogateen!” – Heshiis mar qura isku diray Faransiiska,…
DAAWO: Daalibaan oo helay gantaalo baalistig ah oo ay ku jiraan…
Home Ciyaaraha AC Milan oo samaysay arrin marka ay dhacdo ay Horyaalka qaadi jirtey...
AC Milan oo samaysay arrin marka ay dhacdo ay Horyaalka qaadi jirtey (Akhri 4tan rikoodh)
(Milano) 18 Okt 2020 – AC Milan ayaa xalay 2-1 dirtay kooxda ay deriska yihiin ee Inter Milan oo ay marti u ahayd, iyadoo sidaa ku qabatay hoggaanka Horyaalka Talyaaniga ee fasalka 2020-21 Serie A oo ay 100% ku waddo, kaddib 4 kulan.
Zlatan Ibrahimovic ayaa labada goolba dhaliyey, iyadoo ay goolashu yimaadeen 16-kii daqiiqadood ee ugu horreeyey ciyaarta, waloow Rossoneri uu Lukaku mid kasoo jaray intii la kala nasan.
Haddaba, Milan ayaa samaysay ilaa afar rikoodh oo taariikhi ah….
– AC Milan ayaa gool dhalisay 24 kulan oo xiriir ah oo Serie A ah markii ugu horreeysey tan iyo 1973-kii (iyadoo markaa gaartey 29 kulan).
– AC Milan ayaa wada badisay 4ta kulan ee ugu horreeya Serie A markii 5-aad taariikhda. Kuwii hore waxay ahaayeen 1995-96 1995-1996 oo kooxdii loo yaqaanney Grande Milan ee Fabio Capello ay bilowgii dishey Padova, Udinese, Roma iyo Atalanta., 1992-93, 1954-55 iyo 1950-51. Milan ayaa markasta oo ay sidaa yeesho horyaalka qaadaysey.
– AC Milan ayaa todobaadkan keli ku noqotay hoggaanka Horyaalka Serie A waana markii ugu horreeysey tan iyo Maarso, 2012.
– Zlatan Ibrahimovic ayaa haatan 8 gool ka dhaliyey Derby della Madonnina, kuwaasoo uu 6 ka mid ah AC Milan u dhaliyey, halka uu labada kale Inter u dhaliyey.
Previous article”Ugu dambayn xiriir waan la yeelanaynaa Israel” – Wasiir Dibadeedka Sucuudiga oo bannaanka yimid + Shuruud
Next articleAFRIKA miyay ka adkaatay durayga dilaaga ah ee Covid-19?
XOG: Ingiriiska oo Golaha Amaanka ka codsaday in kulan gaar ah laga yeesho Somalia
(Muqdisho) 17 Sebt 2021 - Xogo hor leh ayaa kasoo baxaya sababta uu duullimaadkii dayuuradda Turkish Airlines ugu hakaday dalka Jabuuti. Dayuuraddan ayaa la sheegay...
DEG DEG: ”MW ma faragelin karo howlaha RW” – War Saxafadeed jawaab ah oo kasoo baxay Xafiiska RW Rooble
Madaxwaynuhu awood sharci ah ma u leeyahay inuu laalo ama dhimo awoodaha Raysal Wasaaraha?